Paul Scholes Oo Shaaciyey Magaca Weeraryahankii Ugu Wanaagsanaa Ee Uu Ka Garab Ciyaaray - Gool24.Net
Paul Scholes Oo Shaaciyey Magaca Weeraryahankii Ugu Wanaagsanaa Ee Uu Ka Garab Ciyaaray
Halyeygii Manchester United ee Paul Scholes ayaa shaaciyey weeraryahankii ugu fiicnaa ee uu ka garab ciyaaray muddadii uu garoomada ku jiray ee uu xidhnaa funaanadda Manchester United.
Laacibkan hore ayaa cimrigiisa ciyaareed oo dhan waxa uu ku qaatay Manchester United oo uu kula guuleystay 11 horyaal oo Premier League ah, laba Champions League iyo koobab kale oo maxalli ah, waxaanu tiir dhexaad u ahaa laacibiintii kubadda xarragada leh kusoo bandhigi jiray Old Trafford.
Waqitii uu joogay Manchester United, waxa Paul Scholes uu ka garab ciyaaray laacibiin waaweyn oo ay ku jiraan Eric Cantona, Andy Cole, Dwight Yorke, Wayne Rooney, Carlos Tevez iyo Robin van Persie oo dhamaantood goolal qurux badan oo guulo ku hoggaamiyey u dhaliyey kooxda.
Si kastab, waxa uu rumaysan yahay in Van Nistelrooy uu yahay laacibka ugu wanaagsanaa ee weerarka ah ee ay u wada ciyaareen Manchester United.
Isaga oo la hadlayay BBC Sports, waxa uu Paul Scholes yidhi: “Taasi waa mid fudud. Ma doonayo inaan ixtiraam darro mu juuniyo weeraryahannada kale, sababtoo ah, waxaan lasoo ciyaaray laacibiin cajiib ah, gaar ahaan United, sida Andy Cole, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer isku waqti, laakiin laacibkii ugu fiicnaa xidhiidhku wuxuu ahaa Ruud van Nistelrooy.
“Xili ciyaareed aan ka garab saftay, waxaan u malaynayaa inaan dhaliyey 20 gool aniga oo lambar 10 ka dheelaya. Waxaan garanayay waxa uu doonayo, waxaan aqaanay orodka uu sameeyo iyo halka uu ka doonayo in kubadda loo dhigo.
“Alla muxuu dhamaystire ahaa. Ninkaasi wuu gaajaysnaa, noloshiisuna waxay ku tiirsanayd dhalinta goolasha. Wuxuu ahaa ciyaartoygii aan dareemay inaan xidhiidh weyn leenahay.”